Sarudzo?! Ingozvirega, Trollongren awana kuravira zvakare
Dare remakurukota (vd Koning): kumiswa kwesarudzo nekuda kwekoronavirus hakugone kutongwa
"Kuvhota netsamba zvakare 'ndidzo dzinogoneka', anodaro Ollongren." hahahaha
Nenzira, verenga Chirevo Chekuburitsa chirevo chechisimba chisina magetsi gasi, zvakasarudzika Trollongren zvaakaita nazvo. Zvinogona kutora chimwe chinhu ... zvakakwana Mari yemuturodam mutero iri kusundirwa mukati mayo
Mune fomu yazvino, iyo Natural Gesi-Yemahara Nevakidzani Chirongwa haibatsiri zvakakwana kune zvinangwa zveGurukota rezveMukati neHumambo hwehukama (BZK) kuita nharaunda dzakasarudzika gasi. Gurukota rezveMukati neHumambo hwehukama hwasimudza tarisiro dzisingakwanise kuzadzikiswa.
ndiudze .. zvinongoenderera mberi. Kunze kwegesi, izvo hazvifanire kunge kuseka gasi?
Minister Ollongren vanoongorora rimwe nehafu yemamita bhoti
Denda reCOVID-19 parizvino harisi chikonzero chekusakwanisa kuronga kana kumisa sarudzo dzeparamende 2021, asi zvinogona kuita kuti bhokisi revavhoti risaratidze zvakasiyana. Minister Kajsa Ollongren veMukati vakanyora mutsamba kuparamende neChishanu kuti vari kuferefeta izvi. Izvi hazvingoshande musarudzo kuenda kuimba yeVamiriri, asiwo musarudzo dzedare repachitsuwa yeSt Eustatius nemamwe mabhokisi emapurisa evavhoti anozoitika muhafu yechipiri ya2020.
Ministry of the Interior ichaita mamiriro ezvinhu kuti sarudzo dzifanirwe kutaridzika sei kana bhokisi revavhoti richida kugadziriswa. Izvi zvinogona semuenzaniso kugadzirisazve nzvimbo dzekuvhota. Minister Ollongren vanotaurawo nezve mukana wekuvhota netsamba kana pasina imwe nzira. Kune izvi anowedzera kuti kuvanzika uye rusununguko rwekuvhota hazvigone kuchengetedzwa pamwe neyakajairwa kuvhota panzvimbo.
Kushanya kwakazara: 2.514.384
Marcos op Corona C dambudziko Covid-19 inorangaridza 2003 XNUMX Bl Blaster hutachiona hwakauraya Bill Gates
Kutyisidzira kwebhomba op Corona C dambudziko Covid-19 inorangaridza 2003 XNUMX Bl Blaster hutachiona hwakauraya Bill Gates
Camera 2 op Simba rekushandura rinotanga nekudeura kwekutya, kuronga uye kunyepa kwenhema uye kushanduka kuva shanduko yechokwadi
bounz op iPhone inovanza covid-19 app mune yazvino i-OS 13.5 yekuvandudza